Banyere Anyị - Binzhou Bangyi Metal Products Co., Ltd.
Binzhou Bangyi Metal Products Co., Ltd. e guzobere na 2010 na Binzhou, azụmahịa ụzọ ámá obodo nke Shandong. Factorylọ ọrụ na-ekpuchi mpaghara nke mita 10,000. Companylọ ọrụ a nwere ọnọdụ dị elu karịa, na nso Port Qingdao. Binzhou Bangyi Metal Products Co., Ltd. bụ onye-nkwụsị mmepụta enterprise tụnyere mmepụta, R&D, ahịa na ọrụ. Ọ nwere ndị ọkachamara na-ahụ maka njikwa ọkachamara na ndị R & D tozuru okè, ma malite ngwaahịa ọhụrụ 1-2 kwa ọnwa. Isi ụlọ ọrụ ahụ bụ eriri waya waya galvanized, igwe anaghị agba nchara nchara ụdọ na eriri igwe efere plastik, ma nwee ike mepụta ụdị nkọwapụta ụdị waya waya pụrụ iche dịka ndị ahịa chọrọ. A na-eji ngwaahịa ndị dị n'elu arụ ọrụ na lọjistik, ọdụ ụgbọ mmiri, ihe owuwu, eriri, ịkụ azụ, iwu, njem na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
The ụlọ ọrụ nditịm-arụpụta dị na GB, ISO, DIN, JIS, AISI, ASTM, ISO9001-20000 mba quality ụkpụrụ. Thedị ngwaahịa ahụ kwụsiri ike ma bụrụ nke a pụrụ ịdabere na ya, ọ meriekwa ihu ọma nke ndị ahịa ọhụrụ na ndị ochie maka ike ya dị elu, ike siri ike, enweghị nkwụsi ike, iyi nkwụsi ike na uru ndị ọzọ. N’afọ ndị na-adịbeghị anya, a na-ebupụ ngwaahịa ndị a na Europe, Africa, Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, Middle East na mba ndị ọzọ na mpaghara.
Companylọ ọrụ ahụ ga-agbaso usoro ihe ọmụma azụmahịa na ebumnuche nke ịkwụwa aka ọtọ na mmesi obi ike, ma were usoro njikwa njikwa nke na-ekwusi ike njikwa ọrụ na ahụmịhe ndị ahịa, na-azụ ahịa mgbe niile, na-aga n'okporo ụzọ nke mmepe na-adigide dị ka onye ndu, ma na-agba ọtụtụ ụlọ ọrụ ume ka ha jiri anyị na ngwaahịa. Nye ndị ahịa ezigbo iji ahụ. Anyị ji obi anyị niile na-anabata ahịa na ndị ọrụ ibe si n'ọnọdụ dị iche iche nke ndụ n'ụlọ na mba ọzọ na-abịa ichoputa, gosi, kpakorita azụmahịa, nkwonkwo ịmalite na-arụkọ ọrụ ọnụ, na-achọ nkịtị mmepe na ike amamiihe.
Ndị ọrụ bụ akụ anyị kacha baa uru. Companylọ ọrụ anyị na-etinye ahụike na ahụike nke ndị ọrụ nnukwu mkpa. Ya mere, ụlọ ọrụ anyị na-ahazi egwuregwu egwuregwu otu, ọrụ ụlọ, njem na ọrụ ndị ọzọ iji mee ka njikọta, ntụkwasị obi na ọrụ nke ndị otu ahụ.
Eriri igwe anaghị agba nchara Waya eriri, Steel Waya eriri kpaliri, Igwe anaghị agba nchara Waya eriri ịkwanyere ntekwasa, Electro kpaliri Steel Waya eriri, China rụpụta kpaliri Steel Waya eriri, Vkwanyere ntekwasa kpaliri Steel Waya eriri,